प्रसौनी गा.पा. अध्यक्ष भोला प्र.गुप्ता द्वारा शुभ सगुन स्वरूप रु ५१००० प्रदान - BSN.COM.NP
By अनिल पाण्डेय	 On ९ चैत्र २०७७, सोमबार २१:१०
अभय दुबे।।बारा।। फागुन ०९
बाराको प्रसौनी गाउँपालिका एतिहासिक नया आयाम सुरु गरेको छ ।
प्रसौनी गाउँपालिकाले बेटि बचाउ बेटी पढाउ अन्तर्गत छोरी शिक्षा तथा बालबिवाह उन्मुलनका लागि चलाएको थियो । तत् पश्चात अध्यक्ष सगुन अभियान कार्यक्रम पनि संचालन गरिएको छ।
प्रसौनी गाउँपालिका वडा न १ निवासी कलिम मिया मन्सुरीले आफ्नो छोरीलाई स्नातक पश्चात् आफ्नो खुट्टामा आफै उभिए पछि विवाह गर्ने योग्य भएकोले विवाह गर्नु भई राखनु भएछ । तत् पश्चात शुभ सगुन स्वरूप गा.पा.अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ताले आफैं विवाह मण्डपमा पुगी रु ५१०००/- प्रदान गर्नु भएको छ । उहाको भनाई अनुसार बोल्नु भन्दा राम्रो गरेर देखाउनु पर्छ र जनताको हक हितको र सहयोगको लागि प्रसौनी गाउँपालिका र म सधैं यस्तै सहयोग गर्ने छु ।
सहयोग पाए पछि छोरीका आमा खुशी व्यक्त गरेकी छिन। र सम्पूर्ण आमा बुवाले आफ्नो छोरोलाई राम्रो शिक्षा दिएर आफ्नो खुट्टामा उभियाएर विवाह गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ । साथै अरूलाई पनि यस्तै सहयोग गर्नु भनेर गा.पा. अध्यक्ष गुप्ता सङ्ग आग्रह गरेकी छिन् ।
उक्त ठाउँमा प्रसौनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गिता देवी साह, प्र.प्र.अ धनेन्द् भुजेल ,वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष बैजु गुप्ता; वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष आनन्द कुमार गुप्ता , गा.पा.का कर्मचारीहरु र स्थानीय बासीहरु को सहभागिता रहेको थियो । भने निप्पु गुप्ताले जानकारी गराएका छन ।
बिकासको आधार सहकारी रहेको : नगरप्रमुख यादव
This Month: 13186